Douglas DC-3 Kobciyay FSX iyo P3D
Douglas DC-3 Kobciyay FSX iyo P3D Bilood 5 6 maalmood ka hor #1628
Su’aal deg deg ah:
Markii aan duulo Douglas DC-3 La Ballaariyay FSX in aan FSX Steam (Waan jeclahay diyaaradda), kadambeysyadeyda sinnaba dhulka kuma wada jiraan iyo markii duulaya - bidix ayaa loo daadinayaa, midigtana waa la duubay (eeg sawirka). Markaan usameynayo usheyga dhulka ama hawada; si kastaba ha noqotee, diyaaradda si fiican ayey u duushaa, laakiin way fiicnaan laheyd haddii ciladdu ay shaqeyneyso - waxay ku sameeyaan diyaaraddayda kale, labadaba lacag iyo lacag la'aan.
Waxaan la duulayaa Thrustmaster T.Flight HOTAS X.
Wixii fikir ah oo ku saabsan sida tan loo xaliyo… waxaa suurta gal ah inaad tirtirto diyaaradda oo aad ka soo degtid Rikooo ka dibna dib iigula soo baxno aniga FSX Barnaamijka Steam ama waxaa jira xoogaa sixitaan ah oo aan ku sameyn karo feylka qaabeynta?
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.160